ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဧပြီ ၇ ရက် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ
အချိန်တန် ရင် တော့ ပြီးသွားမှာပါ
ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တာက ဖြစ်ကို ဖြစ်သွားမှာပဲ
ပျော်ပျော်ကြီးသာ လုပ်ကြပေတော့ တိုင်းပြည်အကိူ့း အတွက် ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်းမှာ စိတ်ဓါတ်တွေက လည်းပြောင်းဖို့ လို ပါပြီ
နိုင်ငံ မှာ မြေပေါ်က သစ်တောတွေ ၊ လယ်ယါမြေတွေ၊
လူနေရပ်ကွက်တွေ ၊ ။ ။ ။
မြေအောက်က ဓါတ်သတ္ထု တွေ၊ ။ ။ ။
ရေအောက်က GAS ? ရေထွက် ပစ္စည်း တွေ ၊
........... အားလုံး ......... ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ ။
.. အဲ ... ကျန်တာ တော. ရှိပါသေးရဲ. ၊
... ပြည်ပကြွေးမြီ ... ဒေါ်လာ သန်းချီ၊ .... ပြည်သူအများ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၊ ........
နိုင်ငံ ရဲ. မြေပေါ်မြေအောက် ၊ ရေပေါ်ရေအောက်က GAS
နဲ.သယံဇာတ တွေကို နောင် မျိုးဆက်အတွက် ......
U Than Shwe/ Mg Aye/ Khin Nyunt/ Thein Sein / Htay OO / Shwe Mann/ team,
Please review all such things that what you have done and what you are doing. Time is now you should notice you are one of human society
if you willing to be.
Best way to step out and hand over full authorised power to DASSK. This is the best time. If you do so, people will be happy and appreciate you.
You stay back and do not interrupt anything.
We do not believe what you do and are doing such things for country..
Do not play political again and again and again.........do feel pity the people. Do not follow yr. farther China.
အာဏာဆိုတာ ယစ်မူးသာယာသွားရင် ရာထူးကြီးကြီးတွေ ထားလိုက်ပါဦး... ဆယ်အိမ်ခေါင်း အဆင့်လောက်ကတောင် နေရာဖယ်ပေးချင်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ရုံးက ဒလ၀မ်ကအစ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အာာဏာပြချင်တတ်ကြတာ။ ကမ္ဘာ့အာဏာရှင်ကြီးတွေ နောက်ဆုံးမှာ ဇာတ်သိမ်းမလှကြတာလည်း ဒီအာဏာ ယစ်မူးမှုပါကြောင့်ပါပဲ။ ခုချိန်မှာ အာဏာရှင်တွေသာ အစိုးရိမ် လွန်တာမျိုး မရှိဘဲ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် ကိုယ်ကျိုးမပါတဲ့ စေတနာလေးများ ထားတတ်ခဲ့ရင် သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဝင်သူုတော်ကောင်းကြီးတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ မေ့လွယ် ပျောက်လွယ်၊ အညှိုးအတေး အနည်းဆုံးနဲ့ သဘောထား အကြီးဆုံးလူမျိုးဟာ မြန်မာလူမျိုးလို့ ထင်ပါတယ်။